सासु कोषविरुद्धको मुद्दाको आज सुनुवाई हुँदै ! – Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.
सासु कोषविरुद्धको मुद्दाको आज सुनुवाई हुँदै !
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने भन्दै २२ बैंकका कर्मचारीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको आज बिहिबार सुनुवाई हुँदैछ। कोषमा नजाने जाने/नजाने बिषयलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश मागेका बैंकका कर्मचारीको मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको हो ।
तीन वटा सुनुवाइपछि अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय गर्ने भएको छ। यसअघि दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र आवश्यक निर्णय गर्ने भन्दै अदालतले सुनुवाइ तोकेको थियो । मंगलबार दिनभरी बहस हुँदा पनि टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । आज हुने छलफलपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय गर्नेछ।
अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews[email protected] मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।